कैलाश मानसरोवर कोराको निचोड– अप्प दीपो भवः | Ratopati
शुक्रबार ६ असार, २०७६ Friday, 21 June, 2019
कैलाश मानसरोवर कोराको निचोड– अप्प दीपो भवः
personअशोक सिलवाल exploreकाठमाडौं access_timeअसोज १७, २०७५ chat_bubble_outline0
केरुङबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा बाह्र दिनअघि तिब्बत छिर्दाको जस्तो कुनै ‘क्युरियोसिटी’ थिएन । तर देश फर्किनुमा आकाश जस्तो फराकिलो खुशी थियो ।
रसुवागढीबाट नेपाल प्रवेश गर्दा आत्मविश्वास वसन्तको बनको हरियालीजस्तै बाक्लिएको थियो । मातृभूमिमा पहिलो पाइला टेक्दै घर आइपुगेको जस्तो लाग्दोरहेछ । देशको कुनै एउटा छेउ मात्र पनि नितान्त आफ्नै घर आगन लाग्दोरहेछ ।
तिब्बत प्रवेश गर्दा के गर्न हुने ? के गर्न नहुने ? कहाँ फोटो खिच्न हुने ? कहाँ नहुने ? कहाँ हिँड्न हुने ? कहाँ नहुने ?’ जस्ता प्रश्नहरू ज्ञात–अज्ञात भई मनमा आइरहन्थे ।
एउटा उदाहरण दिइहालौं । हामीले मानसरोवर परिक्रमा त्यहाँको सरकारले व्यवस्था गरेको ठूलो बसबाट गरेका थियौं । म चाहन्थें, ‘ड्राइभर छेउको बर्नरमा बसेर मानसरोवरका सारा दृश्य एकै पटक हेरौं । धेरै फोटो खिचौं ।’ त्यसका लगि मैले गाइडसँग अनुमति मागेँ । अनुनय विनय गरेँ ।
‘यहाँको नियमले त्यसो गर्न दिँदैन । सिटभन्दा बढी सङ्ख्यामा बस्न पाइँदैन । बर्नरमा त बस्न हुँदै हुन्न’, उसले भन्यो ।
मैले कुनै सवाल–जवाफ गरिनँ । म चुपचाप कुनै एउटा सिटमा खुम्चिएर झ्यालको चेप्टो सिसाको कारण खुम्चिएको मानसरोवर चियाउन विवश भएको थिएँ । यता भइदिएको भए म सवाल–जवाफ गर्थें । जिद्धी गर्थें । उस्तै परे झगडासमेत गर्थें ।
चेकपोस्टहरूमा गाइड गाडीबाट ओर्लन्थ्यो । म पनि ऊजस्तै ओर्लेर त्यहाँको तरिका र प्रक्रिया नजिकबाट बुझ्न चाहन्थेँ । तर त्यसका लागि मलाई न अनुमति थियो न त मैले त्यसो गर्ने हिम्मत नै गरेँ ।
सेल्फ सेन्सरसिपको सतत् मनोविज्ञानले समातिएको थिएँ म । तर मेरो देशमा भएको भए म त्यस्तो मनस्थितिमा कदापि हुने थिइनँ । नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको स्वाभाविक पखेटा फिजाउँदै म त्यहाँ जसरी ‘जसोजसो बाहुन बाजे, उसोउसो स्वाहा’ गर्ने थिइनँ ।
हो, नेपाल छिरेपछि तिब्बततिरको जस्तो सुगम बाटो थिएन । तर म मेरै बाटोमा अभ्यस्त थिएँ । मलाई अप्ठ्यारै सही, नेपालकै बाटो आफ्नो लाग्यो । यसोभन्दा अन्ध राष्ट्रवादको गन्ध आउला तर मलाई त्यस्तै लाग्यो ।
धुन्चे चेकपोस्ट क्रस गरेर कालिकास्थानतिर अगाडि बढ्दै गर्दा सडकछेउको थुम्कोमा एउटा जोडी मायाप्रितीको कथा रचिरहेको थियो । उनीहरू गोठाला थिए कि ? किनभने अलि अगाडि बाख्रा सडकभरि छिरोलिइरहेका देखिए । तर, प्रेममा परेपछि गोठालाहरूलाई बाख्राको के वास्ता ?
पर डाँडानेर सुन्दर इन्द्रेणी देखियो ।
तिब्बत यात्रामा कुनै दिन एक पटक पनि इन्द्रेणी देखिनँ तर तिब्बतका पहाडहरू आफै इन्द्रेणीजस्ता । इन्द्रेणीका रङजस्ता । पहाडहरू स्वयम् रङ बनेर निर्मित अद्भूत इन्द्रेणी ।
तिब्बतमा हिमाल हेर्न टाउको उठाउनु नपर्ने र कहीँ त अझ तल हेर्नुपर्ने । त्यो भूगोलबाट फर्केको मलाई बाटोमा तिब्बतको सुन्दर सम्झना आइरहेको थियो । तर नेपाल झनै सुन्दर अनुभूत भइरहेको थियो ।
तिब्बत राम्रो, नेपाल झनै राम्रो ।
जिन्दगीमा तिब्बत एक पटक जानु असाध्यै राम्रो तर जो कसैका लागि समेत नेपाल पटक पटक आउन लायक छ । तिब्बत भूगोलको, जीवनको एउटा एउटा फेस हो । तर नेपालमा संस्कृतिको, भूगोलको, मान्छेको जीवनको अनेक अनेक फेस छ । तराईदेखि हिमालसम्म फैलिएको भूगोल र सोहीअनुसारको प्रकृति, संस्कृति र जीवनले भरिएको नेपाल, अहा !
खासमा तिब्बतमा मैले एउटा बृहत् ‘मुस्ताङ यात्रा’ मात्र त गरेको थिएँ । भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल त साँच्चै एउटा सानो विश्व नै हो ।
हो, हाम्रो मुलुकमा भौतिक विकास द्रुततर हुन सकिरहेको छैन । तर राज्य इमानदार भएर लाग्ने हो भने त्यो कुन ठूलो कुरा हो र ? अरूले भौतिक विकास गर्न सक्छन् भने हामीले किन सक्दैनौं ?
भैंसेमा पहाड काटेर सडक विस्तार गर्ने काम चलिरहेको रहेछ । हाम्रो गाडी पनि निक्कैबेर रोकिन पर्याे । हामी यात्रु गाडीबाट झर्याैँ, त्यहाँको दृश्यावलोकन गर्याैँ । जथाभावी बालुवा गिट्टी झिकिँदा हिउँदमै धमिलो हुन थालेको त्रिशूली नदी वर्षा मासमा झन् धमिलिएकी थिइन् ।
बाटो खुल्यो । गाडीमा आउँदा ड्राइभर छेउको मेरो सिटमा भारतीय मूलका एक यात्री बसेछन् । उनले मलाई आफ्नो सिटमा गएर बस्न अनुरोध गरे, म त्यहीँ गएर बसेँ ।
अचम्म ! सँगैको सिटकी यात्री मलेसिलाबाट कैलाश यात्रामा आएकी समीपा रहिछन् । म त्यहाँ बस्न पुग्दा उनले अनुहार बिगार्दै मुन्टो बटारिन् । यी तिनै महिला थिइन्, जो केही दिनअघि मसँग झ्याम्मिदै हिमचिम बढाउन लालायित थिइन् । सायद, जुटुलपुकमा समीपाको पावर बक्स प्रस्तावलाई मैले ‘सही ढङ्ग’ले नलिएकाले उनी मसँग निकै रिसाएकी रहिछन् ।
भएको के थियो भने जुटुलपुकमा बसेको साँझ समीपा आँखा चम्किलो पार्दै मछेऊ आई । उसले मलाई एक्कासि एउटा सानो गिफ्ट दिँदै भनी, ‘मिस्टर रोमियो, आई वान्ट टु गिफ्ट दिस पावर बक्स ।’
म छक्क परेँ ।
उसले खुलस्त भनी, ‘केटीहरूलाई कसरी पट्याउने तिमीलाई राम्रोसँग थाहा रहेछ ।’
‘कसरी ? तिमी मलाई आरोप पो लगाउँदै छ्यौ कि ?’
समीपाले भनी– ‘मलाई तिम्रो स्टाइल मन प¥यो ।’ उसले डोल्माला कटेसी भेटिएका दुई ‘स्नो गर्ल’ सँग मात्र होइन, केही दिनअघि मानसरोवरमा भेटिएकी जस्मिनसँगको मेरो हेलमेल आफूले नोटिसमा राखेको बताई ।
‘मलाई पनि तिमीसँग सेल्फी खिच्ने मन छ’, उसले थपी, ‘पावर बक्समा एनर्जी क्याप्सुल छ । त्यो मैले तिमीलाई मनैदेखि दिएको हुँ ।’
मलाई के लाग्यो भने, स्थिति गम्भीरताउन्मुख छ, हल्का रूपमा लिएर पन्छिनु उत्तम हुन्छ ।
‘यहाँ कतिवटा क्याप्सुल छ ?’, मैले बट्टा हातमा खेलाउँदै भनेँ ।
‘थुप्रै’, उसले भनी ।
‘एक पटकमा कतिवटा क्याप्सुल खाँदा हुन्छ ?’, मैले हाँस्दै सोधेँ ।
‘यतिवटा नै खानुपर्छ भन्ने कुनै नियम छैन । जतिवटा खायो, त्यति नै पावर आउँछ’, उसले पनि हाँस्दै भनी ।
‘अनि ?’, मैले सोधेँ ।
‘अनि के ?’, फेरि उसले हाँस्दै सोधी ।
‘अनि पावर आएपछि...?’, विषयको अन्तर्य सोधेर उसलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेँ ।
मेरो प्रश्नले ऊ थोरै लजाए जस्तो गरी र अन्ततः मजाले हाँसी । टल्किएको उसको कालो अनुहारमा दात भने हिउँझैँ टल्केको थियो ।
उसलाई धन्यवाद दिएर म पन्छिएँ । सायद ऊ चाहन्थी, यात्राका बाँकी दिन म ऊसँग नजिक हुँ । सायद ऊ चाहन्थी, हिमालयमा हाम्रो फिजिकल फ्युजन होस् ।
कुरा त्यतिमै टुङ्गियो । मैले ऊसँग हिमचिम बढाइनँ ।
अहिले यात्राको अन्तिम दिन, संयोगले केही घण्टा बसको एउटै सिटमा पर्यौं । म सहज थिएँ तर समीपा मसँग एक पटक पनि बोलिन ।
खै, मान्छेको जातै स्वार्थी हुन्छ कि कसो !
लौ, समीपा त उसको क्षणिक स्वार्थपूर्ति नभएकाले मसँग बाउँठी रे । हाम्रो समूहमा रहेका अरू यात्री के भएका नि ? उनीहरू पनि काठमाडौँबाट कैलाश कोरामा जाँदा जति हार्दिक थिए, दुःखका साथ भन्नै पर्छ, फर्कंदा उनीहरूबाट त्यस्तै हार्दिकता अनुभव गर्न पाइनँ ।
म दोष अरुमाथि मात्र थोपर्न चाहन्न, समस्या ममा पनि होलान् ।
त्यसैले मलाई लागिरहेको छ, के मनको सरोवर अर्थात मानसरोवरमा नुहाउँदैमा मान्छेको मनका विकार पखालिन्छ त ?
अहँ, हुँदैन ।
त्यसैले मलाई लागिरहेको छ, के शिवको बासस्थल कैलाश कोरा गर्दैमा मान्छेको मनका क्लेश मेटिन्छ ?
अहँ, मेटिँदैन ।
वास्तवमा, तीर्थयात्राको भक्ति अनुभूति पनि मसान वैराग्यसरह क्षणिक नै हुन्छ कि क्या हो ?
हाम्रो हिन्दु संस्कारमा मृत्युपछि मोक्षका लागि १३ दिने क्रिया कर्म गरिन्छ । संयोगले यस पटक हाम्रो काठमाडौं–कैलाश–काठमाडौं कोरा १३ दिनकै भयो । अर्थात् हामीले आआफ्नो मोक्षका लागि जिउँदै क्रिया कर्म गर्याैँ । विश्वभरका हिन्दु, बौध्द र जैन धर्मावलम्बीको विश्वास छ, तिब्बतको कैलाश र मानसरोवर तीर्थ पुगे मोक्ष पाइन्छ ।
तर के मैले मोक्ष पाउँछु त अब ? नढाँटी भन्दा, मोक्षदायक पुण्य कमाएँ कि नाइँ ? थाहा छैन, एउटा रोमाञ्चक यात्राको गज्जबको अनुभूति भने मैले अवश्य गरेँ ।
बरु, मलाई यतिखेर महान सपूत महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सुप्रसिद्ध रचना यात्रीको याद आइरहेको छः
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो ?
कुन सामग्री पूजा गर्ने, साथ कसोरी लाने हो ?
मानिसहरूको काँध चढी, कुन देवपुरीमा जाने हो ?
हाडहरूका सुन्दर खम्बा, मांसपिण्डका दिवार
मस्तिष्कको यो सुनको छाना, इन्द्रियहरूका द्वार
नसा–नदीका तरल तर, मन्दिर आफू अपार
मनको सुन्दर सिंहासनमा, जगदीश्वरको राज
चेतनाको यो ज्योति हिरण्यमय, उसको शिरको ताज
शरीरको यो सुन्दर मन्दिर, विश्वक्षेत्रको माझ ।
भित्र छ ईश्वर बाहिर आँखा, खोजी हिँड्छौ कुन पुर ?
ईश्वर बस्तछ गहिराइमा, सतह बहन्छौ कति दूर ?
खोजी गर्छाै हृदय लगाऊ, बत्ति बाली तेज प्रचुर ?
साथी यात्री बीच सडकमा, ईश्वर हिँड्छ साथ
बोल्दछ ईश्वर मानिसहरूका, पीडा, दुःखको गानामा
दर्शन किन्तु कहीँ दिँदैन, चर्म–चक्षुले कानामा ।
कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन नवदेश बिरानामा ?
फर्क फर्क हे ! जाऊ समाऊ, मानिसहरूको पाउ ।
मानिस भई ईश्वरको त्यो, दिव्य मुहार हँसाऊ
यो यात्रास्मरणको सुरुमै उल्लेख भइसकेको तिब्बत जानुअघिको मेरो मनस्थिति दोहोर्याउँछु :
‘हरेक दिनजसो रक्सी खाने बानी परिसकेको जस्तो भइसकेको थिएँ म । चुरोट त दिनमा बट्टै लाग्न थालिसकेको थियो । म चाहेर नचाहेर त्यस्तो भइसकेको थिएँ । मनमा अनेक तर्कना खेलाउँदै रातरातभर ननिदाउनु अनि बिहान धेरै बेरसम्म सुत्नु मेरो दैनिकी भइरहेको थियो । त्यसको कारण तिब्बत थिएन । त्यसको कारण काठमाडौं पनि थिएन । कारण म आफै थिएँ । ममा एउटा भित्री विश्वास र योजना थियो– तिब्बत छिरेपछि चुरोट कम गर्दै जाने र रक्सी त खाँदै नखाने । पूरै फ्रेस भएर नेपाल फर्कने । त्यसैले तिब्बत मेरा लागि साङ्ग्रिला मात्र थिएन, सुधारकेन्द्र पनि हुनेवाला थियो ।’
तिब्बत जान घच्घच्याउने र रोमाञ्चक यात्रा प्रबन्ध मिलाउने इको ट्रेकका मित्र बिमलजीप्रति आभार प्रकट गर्दै म इमानदारीपूर्वक भन्छु– म साङ्ग्रिलामा पुगेर आएँ, कुनै सुधार केन्द्र हैन ।
विकारका कारण म आफैँ थिएँ र त्यसको निदान पनि म आफैसँग छ । किन पनि भने नेपाली धर्तीकै महान सपूत सिध्दार्थ गौतम बुद्धको सूत्र वाक्य, जुन मेरो मनमा गडेको छ :
अप्प दीपो भवः अर्थात् आफ्नो प्रकाश आफै बन ।
सागा : ह्वेर आई लस्ट माई स्टिक
कैलाशका कथा र किंवदन्ती
कैलाशको काखकी डोल्मालालाई चुम्दा
अद्भूत कैलाश : छुने मख्ख, हेर्ने पनि मख्ख !
दार्चेनदेखि देरापुकसम्मको आकाश र धर्तीका लीला
मनोरम मानसरोवरमा भेटिइन् मनमोहिनी
सागामा कल्याणीलाई हाइले हान्यो
केरुङमा 'राष्ट्रपति सी' सँग सेल्फी
सीमानामा देश दुख्दा
पासपोर्ट हराउँदाको पिरलो
ल्हासासँग मोहनी थियो तर बोलाई डोल्मालाले
पत्रकार/ लेखक तथा टुर-ट्रेकिङ गाइड सिलवाल लाङटाङ सद्भावना दूत पनि हुन् । उनी नेपाल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड होटल मेनेजमेन्ट (नाथम) का ट्रेकिङ प्रशिक्षकसमेत रहेका छन् ।
दक्षिणपन्थी शक्तिले गणतन्त्रलाई ‘हाइज्याक’ गर्ने खतरा
कलाकार कृष्ण मल्लको जीवन : शत्रुघ्न सिन्हाले राजेश खन्नाकी प्रेमिका चिनाए
देव गुरुङको एकै पटक तीनतिर हमला, किन उठाए यस्ता गम्भीर प्रश्न ?
प्रकाशकीय : हाम्रो ध्येय निरन्तर खबरदारी
पूर्वाधार विकास बहस : ‘योजनाविनाका ‘आयोजना’ टिपेर पूर्वाधार विकास असम्भव !’
नेपालले आर्थिक वृद्धिमा फड्को मार्न सकेन : अर्थविद डा. शंकर शर्मा
देशभरी एकैपटक चुनावको व्यवस्था गर्न भारतीय राष्ट्रपतिको प्रस्ताव
चिनियाँ राष्टपति सी र उत्तरकोरियाका नेता किमबीच सहमति
लघुवित्तकी कर्मचारीको हत्यामा संलग्न पक्राउ
शशिशङ्कर ग्यालरी उद्घाटन, रिमालका चित्रमूर्ति र स्थापत्यकला प्रदर्शनी
काठमाडौं फन भ्यालीविरुद्ध उजुरी (पत्रसहित)
राष्ट्रिय टिम तयारी निर्देशकमा राई
भक्तपुरबाट ब्राउन सुगरसहित दुईजना पक्राउ
महानगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माणको योजना
जिल्ला इन्चार्जको हत्या भएपछि बोल्यो विप्लव नेतृत्वको नेकपा